Xog aruurinta Bulshada ee Degmada Franklin (ADAMH Community Survey)
Fikradaha Adeegyada Caafimaadka Dhimirka iyo Isticmaalka Maandooriyaha ee Degmada Franklin ayna ku jiraan Kahortaga, Taageerada Qoyska, Taageerooyinka Soo kabashada, Guriyaynta, Daawaynta, iyo Adeegyada Dhibaatada
The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) waxay ku xirtaa dadka adeegyada caafimaadka dhimirka iyo isticmaalka maandooriyaha ee loo baahan yahay. ADAMH waxay ka codsanaysa qof kasta oo ku dhaqan Degmada Franklin inuu ka qaybgalo xog aruurin ku saabsan adeegyada aageena laga baxsho. Natiijooyinka xog aruurintaan waxay ka caawinayaan ADAMH inay shaqo wacan ka qabato ku xirista dadka adeegyo wanaagsan. Xog aruurintu kuma waydiin doonto xogtaada shaqsiga ah sida magacaaga ama ciwaanka. Xog aruurinta waxaa la xiri doonaa Nofeembar 15, 2020.
ADAMH waxay adeegsanaysaa adeeg bixiye sadexaad, Measurement Resources Company, inay sameeyaan xog aruurintaan bulshada. Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama u baahan tahay in lagaa caawiyo xog aruurinta, fadlan iimeel u dir epafford@measurementresourcesco.com ama wac 614-947-8899.
Marka xog aruurintaan dhammaato, waxaad awoodi doontaa inaad ka qaybgasho tartan lagu bixinaayo laba ah $100 oo kaarka Hadiyada Amazon ah midkood.
* 1. Ma ku nooshahay ama ma ka shaqaysaa Degmada Franklin, Ohio?